Trendy Tech na Nnukwu data: Ihe ị ga-ele anya na nyocha ahịa na 2020 | Martech Zone
Monday, March 2, 2020 Monday, March 2, 2020 Ngwa ngwa Saha
Oge dị anya gara aga dị ka ọdịnihu abịaala ugbu a: Afọ 2020 na-abịakwasị anyị n'ikpeazụ. Ndị edemede akụkọ sayensị, ndị ọkà mmụta sayensị a ma ama, na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ekwuola ogologo oge ihe ụwa ga - adị na, ebe anyị nwere ike anyị agaghị enwe ụgbọ ala na-efe efe, obodo ndị mmadụ na Mars, ma ọ bụ n'okporo ụzọ awara awara, ọganihu teknụzụ nke oge a dị oke egwu - ọ ga - abụkwa naanị gaa n'ihu na-agbasa.
Abia n’ihe gbasara ichoputa n’ahịa, ihe oru ohuru nke iri ohuru na-ebutere ha nsogbu ndi gha agha imeri iji nweta oganihu na-adigide. Ndị a bụ ụfọdụ nsogbu ndị ama ama na nyocha ahịa ga-adị mkpa ịchọpụta na 2020 na otu ụlọ ọrụ kwesịrị isi gakwuru ha.
Continunọgide Na-aga n'ihu na AI
Omume kachasị dị ịrịba ama nke afọ iri na-abịanụ ga-abụ ọganihu na-arịwanye elu nke ọgụgụ isi na-arụ ọrụ niile. N'ezie, a na-atụ anya ka ego zuru ezu na AI na usoro ntụgharị uche gafere $ 52 site na 2021, na nyocha ọhụụ na-achọpụta na 80% nke ndị na-eme nchọpụta ahịa kwenyere na AI ga-enwe mmetụta dị mma n'ahịa.
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike iyi ka ọ na-egosi nchịkwa nke ọfịs na-eduga igwe, anyị ka nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-aga tupu igwe enwe ike iweghara njikwa ọrụ - enwere ọtụtụ ihe ebe ahụ na AI enweghị ike ịme.
N'ọhịa nyocha ahịa, ngwakọta nke ngwaọrụ nyocha na nke dabeere na AI dị mkpa iji nwee ike ịdị irè. Ebumnuche dị n’azụ nke a bụ na agbanyeghị na nzụlite nke teknụzụ AI dị ịtụnanya, ọ nwere ike ịmegharị nghọta mmadụ ma ọ bụ nye nghọta miri emi banyere ihe mpụga dị iche iche nke ụlọ ọrụ enyere.
In nchọpụta ahịa, AI kachasị mma iji rụọ ọrụ dị ala nke na-ekekọta oge nke ndị na - eme nchọpụta - ihe ndị dị ka ịchọta ihe atụ, nyocha ụzọ nyocha, ihicha data, na nyocha data raw, ịtọhapụ ụmụ mmadụ ka ha jiri uche nyocha ha maka ọrụ ndị dị mgbagwoju anya. Ndị na-eme nchọpụta nwere ike itinye ihe ka ukwuu n'ọtụtụ ihe ọmụma ha n'ụzọ zuru oke iji kọwaa ihe ndị na-eme ma nye echiche - a na-anakọta ọtụtụ n'ime ha site na ngwaọrụ akpaaka.
Na nkenke, teknụzụ AI nwere ike ịchọta ọtụtụ data na obere oge. Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe niile data ziri ezi - na ebe a bụ ebe uche mmadụ na-abịa ịchọta data kachasị mkpa iji mee maka nyocha ahịa. Iji ike nke AI na ọgụgụ isi azụmahịa nke mmadụ na ihe okike ha na-enye ụlọ ọrụ nghọta na ha agaraghị enweta ya.
Nche data na nghọta na oge dijitalụ
Site na mkparị nzuzo ọhụrụ ọhụụ kwa afọ, nchekwa data na mmụba na-eweta n'ọchịchị bụ nnukwu esemokwu n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla na-emekọ data ndị ahịa. Ntụkwasị obi ọha na eze n'inye data ha bụ isiokwu na-ekpo ọkụ na ụlọ ọrụ nyocha ọ bụla nke ahịa ọ bụla kwesịrị iburu n'uche ugbu a na n'ọdịnihu.
Nke a dị oke mkpa na afọ na-abịanụ. 2020 ga - ewetakwa nnukwu ihe omume abụọ zuru ụwa ọnụ nke nwere ike jupụta na mkpọsa nke nkwupụta sitere na ndị ọzọ: Brexit na ntuli aka United States. Nghọta sitere na ụlọ ọrụ nyocha ahịa ga-abụ isi: Companlọ ọrụ kwesịrị igosi ụwa na nghọta ha nwetara ga-abụ ike dị mma iji meziwanye ndụ ndị mmadụ karịa iji ha na-agbasa. Yabụ kedu ka ụlọ ọrụ nwere ike isi megharịa ma nwetaghachi ntụkwasị obi a maka ọnọdụ ihu igwe dị ugbu a?
Iji bịaruo arụmụka ụkpụrụ a, ụlọ ọrụ na-eme nnyocha n'ahịa kwesịrị iji ohere mepụta koodu maka iji data eme ihe n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ azụmaahịa nyocha dịka ESOMAR na MRS ejirila ogologo oge duzie ụfọdụ ụkpụrụ nduzi maka ụlọ ọrụ nyocha ahịa ka ha rube isi ma a bịa n'idozi okwu ndị a, ọ dị mkpa ka nyocha miri emi banyere ụkpụrụ omume mgbe ị na-eme nyocha.
Nzaghachi bụ ndụ mmanụ nke nyocha ahịa, na-abịa n'ụdị nyocha nke ejirizi ya iji melite ngwaahịa, ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ, ma ọ bụ ọtụtụ ojiji ndị ọzọ. Ihe ụlọ ọrụ na-eji data ha nwetara site na nyocha a - yana nke kachasị mkpa, otu ha si ezigara ndị ha na-ewe data ahụ dị oke mkpa maka mkpọsa nyocha n'ọdịnihu.
N'ihe banyere nzuzo data, ngọngọ nwere ike ịbụ azịza iji hụ na ndị ahịa na-ejide data ha n'enweghị nsogbu na nghọta. Blockchain enweelarị ọkwa dị ka otu n'ime teknụzụ kachasị ọhụrụ na 21st narị afọ na, na 2020, mkpa nke blockchain ga-abawanye ka ụlọ ọrụ ọhụụ malitere ịmalite ya na sistemụ nchekwa data ha. Site na blockchain, ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-eme nnyocha nwere ike ịnakọta data n'ụzọ doro anya ma doo anya, na-abawanye ntụkwasị obi na-enweghị ibelata arụmọrụ nke data ahụ.
Ọdịnihu Dị Mma nke Nchịkọta Data 5G
5G emesiri ebe a, ya na ụlọ ọrụ nkwukọrịta na-aga n’ihu na-ewepụta nnweta n’obodo dị iche iche n ’ụwa. Ọ bụ ezie na ọ ga-ewe oge iji nweta uru dị oke mkpa, ụgbọ ala na-enweghị ọkwọ ụgbọ ala, egwuregwu VR na-enweghị eriri, igwe na-ahụ maka ime ihe, na obodo ndị mara mma bụ akụkụ nke ọdịnihu dị egwu nke teknụzụ 5G ga-ebugharị. N'ihi ya, ụlọ ọrụ na-eme nnyocha n'ahịa ga-achọ ịmụta otú e si emejuputa teknụzụ 5G wireless na usoro nchịkọta data ha.
Njikọ doro anya kachasị na nyocha ahịa ga-abụ mmụba n'ọtụtụ nyocha ndị emechara site na ngwaọrụ mkpanaka. Dị ka ndị ahịa ga-enwe ike ịnweta oke ọsọ ọsọ na ngwaọrụ mkpanaka ha, ha nwere ike ịnweta nyocha na ngwaọrụ mkpanaka. Mana ojiji eji igwe eji eme ihe nke ugbo ala, ngwa ulo, sistemu nke ulo, na azumahia abawanye nke otutu nchikota data kariri. Nchọpụta ahịa kwesịrị iji nke a.
Site na teknụzụ ọhụụ na mgbanwe na ụzọ ndị ahịa na-esi emeghachi omume na data, 2020 ga-eweta ọtụtụ mgbanwe ndị ụlọ ọrụ nyocha ahịa ga-agbaso. Site n'ịnọgide na-eme mgbanwe maka ọganihu nke teknụzụ site na ịhazigharị atụmatụ ha, nyocha nke ahịa ga-abụ nke a kwadebere nke ọma iji nwee ihe ịga nke ọma ugbu a na n'ime afọ iri ndị ọzọ.
Tags: 5gAmamịghe echicheụkpụrụnghọta
Ngwa ngwa Saha
Sudip Saha, COO nke Ọdịnihu Market Market, ihe award-emeri ahịa nnyocha na ize ike. Onye ọzụmaahịa azụmaahịa gbadoro ụkwụ na ahụmịhe dị ukwuu na nyocha ahịa na njikwa ọrụ gafee vetikal na APAC, EMEA, na Amerika, Sudip bụ onye okwukwe siri ike na onye na-akwado azịza nke ihe ọhụrụ, na-ekwusi ike na ịmepụta azịza ahaziri iche iji gboo mkpa ndị ahịa dị iche iche. .
GetEmails: Chọpụta ruo 35% nke Traffic Web Anonymous gị ma too listi Email gị